FAAHFAAHIN: Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay degaanka Goof-gaduud – Balcad.com Teyteyleey
Ugu yaraan Don’t waste your time searching for cheap Styplon! You can buy it for $49.75 right now! 13 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 15 kalena wey ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goof-Gaduud ee gobolka Bay, iyo ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo jidka loo galay.
Al-Shabaab ayaa sheegatay iney muddo kooban qabsadeen magaalada, ilaa 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay, hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyay arrintaasi, iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka Goof-Gaduud.
Goof-Gaduud oo qiyaastii 30 Km u jirta magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa kusoo noqnoqda dagaallada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
Isbitaalka magaalada Baydhaba ayaa la dhigay in ka badan 10-qof oo ku dhaawacmay dagaalkaasi, iyadoo wararku sheegayaan in ciidamada Dowladda looga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal isla markaana kooxda Al-Shabaab muddo dhowr saac ah ay heysteen fariisimo ciidamada dowladdu ku lahaayeen halkaasi.